Firming Treatment အတွက် Sparkly Shades သုံးရောင်နဲ့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ My Little Pony Glitter Mask! | CosmeticMyanmar
Home » Article » Firming Treatment အတွက် Sparkly Shades သုံးရောင်နဲ့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ My Little Pony Glitter Mask!
Limited Edition အနေနဲ့ထုတ်လုပ်လိုက်ပြီး အသားအရေတင်းရင်းစေဖို့ရန်အတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ GlamGlow ရဲ့ My Little Pony Glitter Mask ဟာဆိုရင် အံ့မခန်းပါပဲ။ Pink, Black & Purple ဆိုပြီး Shades အားဖြင့် သုံးရောင်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ သာမန်အသုံးပြုနေကြ Mask နဲ့မတူဘဲ Glitter လှလှလေးတွေနဲ့ ဖန်တီးထားတာကြောင့် အသုံးပြုရတာအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဒီ Glitter တွေဟာ မျက်နှာပြင်ရှိချွေးပေါက်တွေကို ပိတ်ဆို့ခြင်းမပြုလုပ်တဲ့အပြင် မျက်နှာအသားအရေပိုမိုတင်းရင်းအောင် အတူတကွ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှတော့ လှလည်းလှ အသားအရေအတွက် များစွာ အထောက်အကူလည်းပြုတာပေါ့။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တူတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် Selfie လည်းရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ Perfect Fun ပေါ့။
ဒီ Product ကို Licorice, Marshmallow leaf တို့နဲ့ ဖော်စပ်ထားတာကြောင့် အသားအရေကို ပိုမိုတင်းရင်းစေပြီး ကြည်လင်တောက်ပတဲ့အသားအရေကိုလည်း ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ ချွေးပေါက်တွေကိုလည်း ပြန်လည်ထိန်းညှိပေးနိုင်တာကြောင့် အရမ်းကောင်းတဲ့ Mask လေးဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးမပြုခင်မှာ သေချာမွှေပေးဖို့တော့လိုမယ်နော်။ အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ Applicator ကို အသုံးပြုပြီး မျက်ခုံးမွှေးပေါက်တဲ့နေရာတွေကို ချန်ပြီး ပါးပါးလေးလိမ်းခြယ်ပေးပါ။ လိမ်းတဲ့ပမာဏအပေါ်မူတည်ပြီး ခြောက်တဲ့အချိန်လည်း ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ သေချာခြောက်သွားတဲ့အခါမှာ အစွန်းထောင့်တွေကနေစပြီး တဖြည်းဖြည်း ခွါလိုက်ရုံပါပဲ။ ခွါချပြီးတဲ့အချိန်အထိ မျက်နှာမှာ အနည်းငယ်ကြွင်းကျန်နေသေးတယ်ဆိုရင် ရေနဲ့ သစ်ချလိုက်လို့ရပါတယ်။ တပတ် ၂ကြိမ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး အသုံးပြုတဲ့ Applicator လေးကို အသုံးပြုပြီးတိုင်း Tissue နဲ့သုတ်ပေးပြီးနောက် ဆပ်ပြာနဲ့ သေချာစွာ ဆေးကြောပြီး ခြောက်သွေ့အောင်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်။
Image Source: www.glamglow.com